Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
ဒီဇာတျကားလေးကိုတျောတျောမြားမြားကွညျ့ဖူးကွမယျထငျပါတယျ..ကောငျးဗှိုငျ ဦးထုပျကွီးဆောငျး, အကြီင်ျခပျနှမျးနှမျးနဲ့ ကွာပှတျကွီးကိုငျပီး ကြှနျတျောတို့ကို စှနျ့စားခနျးမြိုးစုံနဲ့ ဖမျးစားခဲ့ပါတယျ.ဟုတျပါတယျ. Indiana Jones ပါ..ဇာတျကားထဲမှာ ခဈြစနိုး Indy လို့လညျးချေါပါတယျ.ဒါရိုကျတာကတော့ ဆရာကွီးတဈစူ ဖွဈတဲ့ Steven Spielberg ပါ..ဒီကားဟာ Indy ဇာတျကား၎ကားလုံးမှာ အကောငျးဆုံးလို့ဆိုကွပါတယျ..Indiana Jones ကိုကြှနျတျောတို့နဲ့စပီး မိတျဆကျပေးခဲ့တဲ့ကားပါ.ဒီဇာတျကားစဖွဈလာပုံကိုအနညျးငယျပွောပွခငျြပါတယျ.တကယျတော့ ဒါရိုကျတာကွီး Spielberg ဟာ James Bond ကားတှကေိုရိုကျခငျြခဲ့သူပါ.သူရိုကျခငျြတာ ရိုကျခှငျ့မရခဲ့တဲ့အတှကျ စိတျပကျြပီး ဟာဝိုငျယီမှာ အပနျးဖွသှေားခဲ့ပါတယျ..
အဲ့မှာတငျ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ Star Wars ဇာတျကားတှရေဲ့ဖနျဆငျးရှငျ ဒါရိုကျတာ George Lucas နဲ့တှပေ့ါတယျ..နှဈယောကျသားစကားပွောမိရာကနေ Spielberg ကသူ့ခံစားခကျြကိုဖှငျ့ဟပါတယျ.ဒီမှာတငျဘဲ George Lucas က ငါ့မှာ James Bond ထကျကောငျးတဲ့ဇာတျလမျးရှိတယျဆိုပီး ပွောပါတယျ.တကယျတော့ Indiana Jones ဇာတျကောငျဟာ 1930 ခုနှဈက တကယျရှိခဲ့တဲ့ ရှေးဟောငျးသုတသေနပညာရှငျ Indiana Smith ရဲ့ Character ပါ.ဒါပမေဲ့ Smith အစား Jones ကိုပွောငျးခဲ့ပါတယျ..ဒီဇာတျကားကို ဒျေါလာ သနျး၂၀ အောကျသာသုံးပီးရိုကျခဲ့တာပါ..Hollywood အသိုငျးအဝိုငျးမှာ ရုံကွီးကားတဈကားအတှကျ သနျး၂၀ ဟာနညျးပါတယျ..ဇာတျကားဟာစရုံတငျတငျခငျြးတော့ ခကျြခငျြးမအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး.သူနဲ့အပွိုငျ Supetman တို့ James Bond တို့ရုံတငျနပေါတယျ.နှဈပတျလောကျကွာတော့ Box office မှာ No.1 ခြိတျခဲ့ပါတယျ.
အမရေိကနျတလှား မှာ 212.2 million ရခဲ့ပီး ကမ်ဘာတဈလှားမှာတော့ 389.9 million ရခဲ့တဲ့ထိအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ..ထုတျလုပျသူနဲ့ ဇာတျလမျးကတော့ George Lucas ဖွဈပီး ဇာတျဝငျတီးလုံးတှကေိုတော့ John Williams ကဖနျတီးခဲ့ပါတယျ..ဇာတျကားစကွျောငွာတော့ `new hero from the creators of jaws and star wars ´ဆိုပီးရေးခဲ့ပါတယျ..Oscar ဆုအတှကျ ၉ဆု ရာထားခံခဲ့ရပီး အကောငျးဆုံးနှရောသီရုပျရှငျ ၂၀ ထဲမှာလညျးပါဝငျခဲ့ပါတယျ..Rating5star ရခဲ့ပီး ကြှနျတျောတို့ကို သညျးတိတျရငျဖို ရသပေါငျးမြားစှာပေးခဲ့တဲ့ Indiana Jones ရဲ့ ပထမဆုံးဇာတျကားကိုမှတျတမျးတငျလိုကျပါတယျ..
ဒီဇာတ်ကားလေးကိုတော်တော်များများကြည့်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်..ကောင်းဗွိုင် ဦးထုပ်ကြီးဆောင်း, အကျီင်္ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ ကြာပွတ်ကြီးကိုင်ပီး ကျွန်တော်တို့ကို စွန့်စားခန်းမျိုးစုံနဲ့ ဖမ်းစားခဲ့ပါတယ်.ဟုတ်ပါတယ်. Indiana Jones ပါ..ဇာတ်ကားထဲမှာ ချစ်စနိုး Indy လို့လည်းခေါ်ပါတယ်.ဒါရိုက်တာကတော့ ဆရာကြီးတစ်စူ ဖြစ်တဲ့ Steven Spielberg ပါ..ဒီကားဟာ Indy ဇာတ်ကား၎ကားလုံးမှာ အကောင်းဆုံးလို့ဆိုကြပါတယ်..Indiana Jones ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့စပီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကားပါ.ဒီဇာတ်ကားစဖြစ်လာပုံကိုအနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်.တကယ်တော့ ဒါရိုက်တာကြီး Spielberg ဟာ James Bond ကားတွေကိုရိုက်ချင်ခဲ့သူပါ.သူရိုက်ချင်တာ ရိုက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့အတွက် စိတ်ပျက်ပီး ဟာဝိုင်ယီမှာ အပန်းဖြေသွားခဲ့ပါတယ်..
အဲ့မှာတင် သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Star Wars ဇာတ်ကားတွေရဲ့ဖန်ဆင်းရှင် ဒါရိုက်တာ George Lucas နဲ့တွေ့ပါတယ်..နှစ်ယောက်သားစကားပြောမိရာကနေ Spielberg ကသူ့ခံစားချက်ကိုဖွင့်ဟပါတယ်.ဒီမှာတင်ဘဲ George Lucas က ငါ့မှာ James Bond ထက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတယ်ဆိုပီး ပြောပါတယ်.တကယ်တော့ Indiana Jones ဇာတ်ကောင်ဟာ 1930 ခုနှစ်က တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် Indiana Smith ရဲ့ Character ပါ.ဒါပေမဲ့ Smith အစား Jones ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်..ဒီဇာတ်ကားကို ဒေါ်လာ သန်း၂၀ အောက်သာသုံးပီးရိုက်ခဲ့တာပါ..Hollywood အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရုံကြီးကားတစ်ကားအတွက် သန်း၂၀ ဟာနည်းပါတယ်..ဇာတ်ကားဟာစရုံတင်တင်ချင်းတော့ ချက်ချင်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး.သူနဲ့အပြိုင် Supetman တို့ James Bond တို့ရုံတင်နေပါတယ်.နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ Box office မှာ No.1 ချိတ်ခဲ့ပါတယ်.
အမေရိကန်တလွှား မှာ 212.2 million ရခဲ့ပီး ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာတော့ 389.9 million ရခဲ့တဲ့ထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်..ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ George Lucas ဖြစ်ပီး ဇာတ်ဝင်တီးလုံးတွေကိုတော့ John Williams ကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်..ဇာတ်ကားစကြော်ငြာတော့ `new hero from the creators of jaws and star wars ´ဆိုပီးရေးခဲ့ပါတယ်..Oscar ဆုအတွက် ၉ဆု ရာထားခံခဲ့ရပီး အကောင်းဆုံးနွေရာသီရုပ်ရှင် ၂၀ ထဲမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်..Rating5star ရခဲ့ပီး ကျွန်တော်တို့ကို သည်းတိတ်ရင်ဖို ရသပေါင်းများစွာပေးခဲ့တဲ့ Indiana Jones ရဲ့ ပထမဆုံးဇာတ်ကားကိုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်..
Option 1 teracloud.jp 547 MB SD (480p)
Option2onedrive.live.com 547 MB SD (480p)
Option5onedrive.live.com5GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1
Option6teracloud.jp5GB FHD (1080p) DTS-HDMA 5.1